ဥရုဂွေးနှင့်ပွဲတွင် အမ်ဘာပီ ခြေစွမ်း ထပ်ပြဦးမည်ဟု မာတူဒီယုံကြည်၊ ကာဗာနီ ပါဝင်ကစားနိုင်ရန - Yangon Media Group
ပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူ မာတူဒီက ကွာတားဖိုင်နယ်တွင် ရင်ဆိုင်ရမည့် ဥရုဂွေးမှာ ခံစစ်ကစားပုံကောင်း မွန်သော အသင်းဖြစ်သော်လည်း အသင်းဖော် အမ်ဘာပီအနေဖြင့် ထပ်မံခြေစွမ်းပြနိုင်ဦးမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အမ်ဘာပီသည် ၁၆ သင်းအဆင့်တွင် အာဂျင်တီးနားကိုအနိုင်ရခဲ့ရာ၌ ပြင်သစ်အတွက် ကိုယ်တိုင်နှစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ပင်နယ်တီကန်သွင်းခွင့်ရရှိရန်လည်း စွမ်း ဆောင်နိုင်ခဲ့ရာ ခံစစ်ပိုင်းမာကျောမှုရှိသော ဥရုဂွေးကိုလည်း ထိုးဖောက်ကစားနိုင်မည်ဟု မာတူဒီက ယုံကြည်နေသည်။
မာတူဒီက ”အမ်ဘာပီဟာ နေရာခပ်ကျဉ်းကျဉ်းမှာတောင် အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်သူဆိုတာ နေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရတာပါ။ သူ့ကိုလူကပ်ကစားရတာ ခက်ခဲတဲ့အပြင် ဘောလုံးနဲ့အတူရှိနေချိန်မှာရော၊ ဘောလုံး နောက်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာရော သူ့ရဲ့ရစ်သမ်ကို အမြဲအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥရုဂွေးအသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်ကို နေရာလွတ်ပေးလေ့မရှိတဲ့ ရင်ဆိုင်ရခက်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်ပေမယ့် အမ်ဘာပီနေရာလွတ်တွေရှာဖွေနိုင်ဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်”ဟု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ပြင်သစ်နောက်ခံ လူ ရာမီက မိမိအနေဖြင့်ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီကဲ့သို့ ဒဏ်ရာမျိုးရှိခဲ့ဖူးပြီး အဆိုပါ ဒဏ်ရာမှာ လုံလောက်သောအနားယူချိန် ရှိရသည့်အတွက် ကာဗာနီအနေဖြင့် မိမိတို့ နှင့်ပွဲတွင် ပါဝင်ကစားနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင် ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
ကာဗာနီသည် ပေါ်တူဂီအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့သောပွဲတွင် တစ်ဦးတည်း နှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပွဲပြီးခါနီးတွင် တံကောက် ကြောဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ပြင်သစ်နှင့်ပွဲအမီကြံ့ခိုင်မှုပြန်ရလာရန် မရေရာသောအနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ရာမီက ”တစ်ဦးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုက တခြားတစ်ဦးအတွက် အားသာချက်ဖြစ်စေတာပါပဲ။ ကာဗာနီဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတိုက် စစ်မှူးတွေထဲမှာ အပါအဝင်ဖြစ်လို့ သူဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် မဆိုးတဲ့သတင်းပါပဲ။ သူ့လို ဒဏ်ရာမျိုးကိုရခဲ့ဖူးတဲ့ကျွန်တော့်အတွက် အချိန်ယူနားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဆေးသိပ္ပံပညာရပ်ကို တွန်းလှန်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမယ့် မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ ကာဗာနီအနေနဲ့ ကျွန် တော်တို့နဲ့ပွဲမှာပါ ဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုရင် သိပ္ပံပညာကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်မှပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဥရုဂွေးတိုက် အသင်းရဲ့အမာခံတိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီ ကစားနိုင်မယ်ဆိုတာကို မယုံကြည်ပါဘူး”ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်ရှိ လမုတောတွင် ဝှက်ထားသည့် လှေပေါ်မှ ကျပ်သုံးဘီလီယံကျော် တန်ဖိုးရှိ စိ??
မိုဒရစ် အကောင်းဆုံးဆု ရရေးထက် ခရိုအေးရှား အောင်မြင်ရန် ပိုအရေးပါ
မုန်းချောင်းကို လှေဖြင့် ဖြတ်ကူး၍ ပွင့်ဖြူမြို့သို့သွားရောက် စာသင်ကြားနေကြရသော ကျောင်းသာ?
ဆေးဆိုင်များ၊ ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများမှဖမ်းမိသော အမှုပြီးပြတ်သည့် ကာလတန်ဖိုးကျပ်သန်းပေါင်း ??
သင်္ကြန်ကာလတွင် ကျုံးအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်သည့် မဏ္ဍပ်များကို အမည်မည်းစာရင်း သ??
ရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ